Qoor Qoor oo si rasmi ah isu-diiwaan geliyey iyo wararkii ugu dambeeyey Galmudug | Caasimada Online
Home Warar Qoor Qoor oo si rasmi ah isu-diiwaan geliyey iyo wararkii ugu dambeeyey...
Qoor Qoor oo si rasmi ah isu-diiwaan geliyey iyo wararkii ugu dambeeyey Galmudug
Dhuusomareeb (Caasimada Online) – Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor ayaa maanta si rasmi ah isugu diiwaan geliyey inuu ka qeyb galo doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug, isaga oo warqadihiisa u dhiibay garab ka mid ah guddiga doorashada.
Qoor Qoor ayaa iska diiwaan geliyey guddiga 8-da xubnood ee taageersan dowladda, waxaana la siiyay shahaadada Musharaxnimo.
Qoor Qoor ayaa ah musharaxii saddexaad ee doorashada isu diiwaan geliya, ayada oo shalay ay is-diiwaan geliyeen laba musharax oo kale, oo dowladda taageersan kuwaas oo xildhibaanada ay ugu yeereen “camirayaal” doorashada u qurxinaya Qoor Qoor.
Labadaas musharax ayaa kala ah Axmed Shire Falagle iyo Axmed Cabdullaahi Samatar oo xalay la diiwaan geliyay, kuwaas oo lacagta ay isku diiwaan geliyeen ay bixisay dowladda, sida ay ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen Caasimada Online.
Qoor Qoor ayaa la filayaa inuu si fudud ugu guuleysto doorashada oo ay diideen musharaxiintii miisaanka cuslaa ee mucaaradka.